TOAMASINA : Ravan’ny polisin’ny Fip ny tambajotran’ny mpamaky trano ny alahady 19 mey lasa teo
Azo ambara fa goavana ny vokatra azon’ny polisin’ny Fip ao Toamasina, ny marainan’ny alahady 19 mey lasa teo. 20 mai 2019
Niainga avy tamin’ny fahatrarana mpamaky trano iray no nahazoana ny vokatra rehetra. Nibaradaka ilay mpamaky trano fa tsy mandeha irery izy fa manana namana mpiara-manao asa ratsy ary efa misy olona mpandray entana halatra sy mivarotra izany indray avy eo.
Notsimponin’ny Fip tsirairay ireo mpamaky trano. Misy efatra izy ireo. Tsy manana fokontany voafaritra manokana anaovana asa ratsy fa saika ireo fokontany rehetra no nanaovan’izy ireo fanafihana. Amin’ny antoandro, mitety fokontany mijery trano hovakiana. Amin’ny alina manatanteraka ny fanafihana.
Mpivady monina eny amin’ny faritra Ambolo madinika iny no mpandray ny entana. Mividy ireo entana halatra, dia mivarotra indray avy eo.
Tamin’ny fotoana nahatrarana ireto tambajotran’ny mpamaky trano ireto, dia mbola sarona ny entana maro, toy ny fahitalavitra, lecteur CD, moto, panneau solaire, vilany.
Nanamarika ny lehiben’ny Fip Toamasina, Kaomisera Rafaliarivo Jules, fa azo antoka fa hampihena ny vaky trano ao Toamasina io vokatra azo io. Efa nampitondra faisana tokantrano maro mantsy ireo jiolahy sarona ireo. Tsy mamaky trano fotsiny ihany fa sady midaroka sy mamono amin’ny alalan’ny fitondrana antsibe.
Ny andron’ny alahady 19 mey io ihany, dia tovolahy iray mpangalatra moto no saron’ny fokonolona tao Androranga parisela 23/21. Tsy nisy kosa ny fitsaram-bahoaka fa natolotry ny fokonolona ny polisy ilay mpangalatra voasambotra.